Tag: fampisehoana | Martech Zone
Ireo paikady marketing 13 B2B malaza indrindra XNUMX
Alatsinainy, 30 Jona, 2014 Alakamisy, Jolay 3, 2014 Douglas Karr
Ity dia infographic mahaliana izay tiako zaraina avy amin'i Wolfgang Jaegel. Tsy hoe satria manome fanazavana momba ny paikadim-barotra momba ny atiny aparitak'ireo mpivarotra B2B, fa noho ny elanelana hitako amin'ny atiny aparitaka mifanohitra amin'izay mety ho vokatr'ireo paikady ireo. Ho filan'ny laza, ny lisitra dia ny haino aman-jery sosialy, lahatsoratra ao amin'ny tranonkalanao, taratasim-baovao, bilaogy, hetsika manokana, fandalinana tranga, horonan-tsary, lahatsoratra momba
Ny tena fahamarinana momba ny fantsom-barotrao
Alatsinainy 17 Febroary 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Voalohany, tianay ireo mpanohana anay ao amin'ny PaperShare, izay nampandeha ny fitahirizam-bokinay tamin'ny alàlan'ny whitepapers sy ebook an'ny mpamatsy anay. Nahazo fipoahana niaraka tamin'ity infographic ity niaraka tamin'izy ireo aho. Nandritra io fizotran-javatra io, nandinika ny antony mahatonga ny marketing amin'ny atiny tsy amin'ny làlam-barotra tokana intsony izahay; Izy io no fototra iorenan'ny ezaka marketing rehetra. Fa maninona ianao no mety manontany? Mety hahagaga anao angamba ity statistika ity. Araka ny fanapahan-kevitra Sirius: B2B
Zoma 8 Novambra 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ho an'ny mpivarotra atiny orinasa, Kapost dia manome sehatra manampy ny ekipanao amin'ny fiaraha-miasa sy famokarana atiny, ny fizotran'asa ary ny fizarana an'io atiny io, ary ny famakafakana ny fihinanana atiny. Ho an'ny indostria mifehy, Kapost dia manampy amin'ny fanomezana làlana fanaraha-maso amin'ny fanovana sy fankatoavana atiny. Ity misy topy topitra iray: Kapost mitantana ny dingana tsirairay amin'ny dingana iray amin'ny sehatra tokana: Paikady - Kapost dia manome rafitra persona ahafahanao mamaritra ny dingana tsirairay ao